မိုဘိုင်းဖန်သားပြင်ကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲ Gadget သတင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းကိရိယာသည်ယနေ့ခေတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်၏တိုးချဲ့မှုနီးပါးဖြစ်သည်။ အလုပ်များ၊ အားလပ်ချိန်များတွင်လေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ၎င်းကိုသယ်ဆောင်သည်။ သဲကန္တာရကျွန်းသို့အဘယ်သို့သွားမည်ကိုသင်မေးလျှင်၊ အရာဝတ္ထုတစ်ခုတည်းကိုသာရွေးနိုင်လျှင်မိုဘိုင်းကိုရွေးချယ်မည့်သူများစွာပင်ရှိသည်။ ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်နေ့လုံးလမ်းလျှောက်သွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်နိုင်ခြေများအတွင်း၎င်းကိုတတ်နိုင်သမျှဂရုစိုက်ရမည်။
Y ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ကိုင်ဖုန်းကိုဂရုစိုက်ခြင်းတွင်၎င်းအပြင်ဘက်နှင့်အပြင်တွင်ပြုလုပ်ခြင်းပါဝင်သည်။ တစ် ဦး ချပြီးကတည်းက မျက်နှာပြင်အကာသို့မဟုတ်လက် ထ ပြန်ယူပါ ငါတို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့လျော့ပြေပြစ်မှုကိုရယူပါ o နေရာလွတ် အတွင်းပိုင်း။ သေချာတာပေါ့ငါတို့ပြောမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုရှင်းလင်းနည်း ၎င်းကိုကောက်ယူ။ ရှင်းလင်းခြင်းထက်၎င်းသည်နက်နဲသောအရာမဟုတ်ကြောင်းသင်ထင်သော်လည်း၎င်းကိုသင်လုံးဝသေချာပါသလား။ ခင်ဗျားကိုရှင်းပြပါရစေ၊ အဲဒါကလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုသိပ်မရှိဘူးဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့မြင်လိမ့်မယ် သေးငယ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် ငါတို့ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်ကိုကြည့်ရအောင်
ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်မီကျွန်ုပ်တို့မိုဘိုင်းဖုန်းကိုနဂိုအတိုင်းထားရှိရန်စျေးကြီးသောကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်မလိုအပ်ကြောင်းသတိရသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြမည့်နည်းလမ်းကိုအိမ်တွင်ရှိသည့်ဒြပ်စင်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒါပေါ့, ဤအရာအားလုံးသည်သင်၌ရှိသည့်မည်သည့်မိုဘိုင်း (သို့) တက်ဘလက်နှင့်မဆိုသက်ဆိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ရွေးချယ်စေကာမူ၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည် အနည်းဆုံး, သော့ခတ်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူလုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ဆောင်ပါ။ ကိရိယာကိုလုံးဝပိတ်ထားခြင်းသည်ပိုကောင်းသော်လည်းမြန်ဆန်သောသန့်ရှင်းရေးဖြစ်ပါကမလိုအပ်ပါ။ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? လုပ်သာလုပ်!
2 Wipe သန့်ရှင်းရေးမျက်မှန်
လွယ်ကူသောအရာဖြင့်စတင်ကြပါစို့။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်သည့်အခါအလွန်အရေးကြီးသည် ထုတ်ကုန်ကောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း terminal ကိုကျွန်ုပ်တို့ပျက်စီးစေနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မလိုလားပါ။ မျက်နှာပြင်၏အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်ကာကွယ်မှုရှိသော်လည်း မှန်ကန်သောထုတ်ကုန်ဖြင့်မသန့်ရှင်းပါကခြစ်ရာများသို့မဟုတ်ခြစ်ရာများကိုပြုလုပ်ရန်မခက်ခဲပါ။ စျေးကြီး။ စွမ်းအားကောင်းသောထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
အချို့သောစက်မှုထုတ်ကုန်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းသန့်ရှင်းရေးအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ထုတ်ကုန်ကိုယ်တိုင်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှအသုံးပြုသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ယနေ့တွင်ရောင်းရန်မိုဘိုင်းဖုန်းအမြောက်အမြားရှိသည် အိုင်ပီကာကွယ်မှု, splash နှင့်ဖုန်မှုန့်ဆန့်ကျင်သို့မဟုတ်လည်းနှစ်ခုမီတာအထိနက်ရှိုင်းသောခံရဖို့ဖြစ်စေ, ဒီကိစ္စများတွင် အဲဒါကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အခါငါတို့ပိုပြီးလွတ်လပ်ခွင့်ရနိုင်တယ်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကာကွယ်မှုရှိသော်လည်းမိုဘိုင်းကိုစုပ်ပုံးအောက်တွင်ထည့်နိုင်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ တစ်ခုခုကိုထိခိုက်စွန့်စားရကျိုးနပ်ဘူး။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းဟာဘယ်လိုကာကွယ်မှုပဲရှိပါစေ၊ ကုန်ပစ္စည်းကိုကောင်းစွာရွေးချယ်ပြီးမှန်ကန်သောအတိုင်းအတာဖြင့်အသုံးပြုပါ။ မရရှိလျှင်သင်လည်ပတ်ရန်လိုကောင်းလိုပေမည် စိုစွတ်လာသည့်မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးအားမည်သို့ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်ဟူသောကျွန်ုပ်တို့၏သင်ခန်းစာ။ ငါတို့သည်ကိုယ်အတွေ့အကြုံမှ၎င်းသည်အရသာကောင်းသောပန်းကန်မဟုတ်ကြောင်းသင့်ကိုအာမခံသည်။
ဘယ်လိုလဲ? မျက်မှန်သုတ် ဟုတ်တယ်၊ သင်၏မိုဘိုင်းဖန်သားပြင်ကိုသန့်ရှင်းစေရန်ဈေးအသက်သာဆုံး၊ အရိုးရှင်းဆုံး၊ အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အလုံခြုံဆုံးရွေးစရာလည်းဖြစ်သည် Wipe သန့်ရှင်းရေးပုံမှန်မျက်မှန်ကိုသုံးပါ။ ၎င်းတို့သည်တစ်ခါသုံးဖြစ်စေ၊ အထည်ဖြင့်ဖြစ်စေဖန်ခွက်သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းနည်းကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ၎င်းသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုကိုလုံခြုံစေသည် ဖန်ခုတ်ခြစ်ခြင်းမပြုပါနှင့်နှင့်ရန်လိုအပ်သောထိရောက်မှု အညစ်အကြေးရှိသမျှကိုပယ်ရှား။ ၊ သူမ။ အိမ်သာသုံးစက္ကူသို့မဟုတ်အလားတူအရာအားလုံးကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ထို့ထက်ကားသင်၏မိုဘိုင်းမျက်နှာပြင်ကိုအခြောက်မရှင်းပါနှင့်။ ၎င်းသည်မျက်နှာပြင်၏အဆုံးကိုပျက်စီးစေပြီးမိုက်ခရိုခြစ်ရာများကိုဖန်တီးပေးလိမ့်မည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ဖန်သားနဲ့လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်သင့်ဖုန်းရဲ့နောက်ကျောကိုသန့်ရှင်းအောင်လည်းလုပ်နိုင်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည်မျက်မှန်များတပ်ဆင်ထားပါက၎င်းသုတ်များထဲမှတစ်ခုအားသယ်ဆောင်ရန်မလွယ်ကူပါ။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ဆဲလ်ဖုန်းတွေသန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတုန်းပဲ။ သင်၏ terminal ကိုသေတ္တာထဲမှလတ်ဆတ်စေလိုပါကဖြေရှင်းနည်းမှာ သန့်ရှင်းရေးအတွက်အရက်ကိုသုံးပါ။ Wipe ကိုရှင်းလင်းသည့်မျက်မှန်နှင့် chamois တွင်အသုံးပြုသောဖြေရှင်းနည်းများသည်များသောအားဖြင့်အဓိကသန့်စင်သူအဖြစ်အရက်ပါဝင်လေ့ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့လည်းသုံးနိုင်သည်။ သေးငယ်တဲ့ Ethyl အရက်နှင့် chamois သို့မဟုတ် microfiber အထည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းစံနမူနာထားခဲ့ဖို့။
ဒါဟာအလွန်အရေးကြီးပါသည် သာအနည်းငယ်ပေါက်လျှောက်ထားပါ, ကိရိယာပေါ်တွင်ဂျက်လေယာဉ် drop မထားပါနဲ့။ အနည်းငယ်လှည့်ကွက်ဖြစ်ပါတယ် microfiber သို့မဟုတ် suede မှာအရက်ကိုလောင်းပါ ပြီးနောက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှောက်သွား။ ဒီနည်းလမ်းနှင့်အတူ အလွန်သတိထားပါငါတို့လည်းလုပ်နိုင်တယ် သန့်ရှင်းသော ကဲ့သို့သောဒြပ်စင်များ နားကြပ်ထိန်သိမ်း၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖုန်များစုဆောင်းနေသည့်isရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရက်၏အရည်အသွေးသည်၎င်း၏သန့်စင်နိုင်စွမ်းအပြင်၎င်းသည်လည်းဖြစ်သည် လျင်မြန်စွာအငွေ့ပျံနိုင်စွမ်းထို့ကြောင့်အသုံးပြုသောဆေးသည်လျင်မြန်စွာအငွေ့ပြန်လိမ့်မည်။ အသစ်ကဲ့သို့ငါတို့စက်ပစ္စည်းထွက်ခွာ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » သင့်ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုရှင်းလင်းနည်း
eBay ကို ကျေးဇူးတင်၍ ၁၁.၁၁ အရောင်းအဝယ်တွင်ရှေ့ဆက်နေပါ